Knowledge – ShweBo News
ဆုတောင်းပြည့်လွန်းလို့ ‘မင်းညီမင်းသားတွေ မဖူးရ’ အမိန့်တော် ထုတ်ပြန်ပြီး သော့ခတ်လို့ အစောင့်တွေ ချထားခဲ့ရတဲ့ ဆုတောင်းပြည့် ရုပ်ပွားတော်မြတ်
အနော်ရထာမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်…၊ နရပတိစည်သူမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်… မည်သည့်မင်းညီမင်းသားမှ မဖူးရလို့အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်ပြီး အစာင့်တွေချထားကာ သော့ခတ်ထားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ရှေ့ကို တနေ့ကရောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားကိုဖူးတွေ့လိုက်တာနဲ့ .. ‘ အို … သပ္ပါယ်လိုက်တာ ‘ လို့ ပါးစပ်က ရောင်ရမ်းပြီး ထွက်သွားမိတဲ့ အထိပါပဲ …။တကယ့်ကို ရင်ထဲမှာ အေးချမ်းသွားအောင် သပ္ပါယ်လိုက်တာ … ။စပါယ်နဲ့ ဇွန်ပန်းတွေကို ရင်ဘတ်တော်မှာပူဇော်ထားတာကလည်းမွေးကြိုင်နေတာပါပဲ ။ရွှေသင်္ကန်းကပ်ပြီး ဆုတောင်းခဲ့မိတာလေးဟာတစ်ကယ်ပြည့်ဝခဲ့တာမို့ သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေပေးချင်မိခဲ့ပါတယ်..။ ဆုတောင်း ပြည့်ဝလွန်းတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးကိုဖတ်မိရင် ပိုပြီးလေးနက်စေမှာမို့ ဇာတ်လမ်းလေးကိုအတိုချုပ်လို့ ရေးပါရစေ Read more
ဒို့ နိုင်ငံ မြန်မြန်တိုးတက်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်နေတာလဲ….
May 19 ဟုတ်ပါတယ် တိုင်းပြည်တစ်ခု တိုးတက်ရေး အကြောင်းအရင်းတွေမှာ စာဖတ်ခြင်းလည်း ပါဝင်နေပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံလည်း တိုးတက်နေဆဲ နိုင်ငံဖြစ်နေတာနဲ့ အညီ လူတိုင်း စာဖတ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း စာဖတ်ခြင်းက ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်တယ် ဆိုတာ ဖော်ပြလိုက်တယ်။ ——စာဖတ်ခြင်း—— သင်သည် စာဖတ်ခြင်းကို မနှစ်သက်လျှင် ဘယ်တော့မှ ဉာဏ်ပညာ ရှိမလာနိုင်ပါ စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ပြည့်ဝသောလူ ဖြစ်စေသည်… မှတ်သားခြင်းဖြင့် တိကျသောလူ ဖြစ်စေသည်။ ထင်းခြောက်သည် မီးစိုက်ဖို့ အကောင်းဆုံး… နှစ်ချို့ဝိုင်သည် သောက်ဖို့ အကောင်းဆုံး… ငယ်သူငယ်ချင်းများမှာ Read more
သပြေဟု အမည်ရှိသည့် အညွန့်သည် လူသားတို့အားအထူးအကျိုးပေးသည်။ အရာရာအောင်စေတက်သော သလောရှိခြင်းကြောင့် အောင်သပြေဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ကပ္ပလင်္ကာရကျမ်း အရ ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ပထမဆုံး ပေါက်သောအပင်မှာ သပြေဟုဆိုထားပါသည်။မြန်မာ့ရိုးရာ လောကီအလိုအရ သပြေသည် သောမဓါတ် သောကြာနှင့် ကြာသပတေးနံပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သောကြာ ၆+ ကြာသပတေး ၅ ပေါင်းသော် ၁၁ရ၏။ အပူ၁၁ မီးကို ငြိမ်းစေတက်သော သဘောရှိသည်ဟု အယူအဆလည်းရှိပါသေးသည်။ သောကြာဂြိုဟ်သက် ၂၁ + ကြာသပတေးဂြိုဟ်သက် ၁၉ ပေါင်းသော်၄၀ရ၏။၄၀ ဟူသောဂဏန်းကို လောကီအလိုအရ စကားရပ်အရ လေးနေသော Read more
အရိုးကျိုးကြေနေရင်တောင် ဒီအမြစ်ကို ထုထောင်ပြီး ကြပ်ထုပ်စီးပေးထားရုံဖြင့် အရိုးပြန်ဆက်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင် ဝံအူမြစ် အစွမ်းကြီးပုံ
ဒါကတော့ အရိုးကျိုးရင် ဒီအမြစ်ကို ထုထောင်ပြီး ကြပ်ထုပ်စီးပေးထားရုံဖြင့် အရိုးပြန်ဆက်တယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့ ဆေးဖက်ဝင် (ဝံအူမြစ်)ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင် ဝံအူမြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း..ဘယ်၍ကောင်းကြောင်းကို ကျွန်တော်မပြောလိုပါဘူး.. ကျွန်တော် ယခုဖော်ပြပေးထားသည့် စာများကတော့ ဝံအူမြစ်ကို လက်တွေ့အသုံးပြုခဲ့ဖူးပြီး လက်တွေ့ပျောက်ကင်းပါတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ လူအချို့ရဲ့ Comments များကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ အစ/အဆုံးဖတ်ရှုပါ။ (၁)ကျွန်တော်ကတော့ လက်ကျိုးတာဘယ်ဆေးခန်းမှလည်းမသွားပါဘူးဝံအူအနီမြစ်နဲ့ပဲကျပ်စီးတါအခုတော့ကောင်းပါပဲ စည်းတဲ့အချိန်နည်းနည်းပေါ့လိုက်လို့ဆက်တဲ့အချိန်အနိမ့်အမြင့်လေးတော့ဖြစ်တာပေါ့ (၃)လက်တွေ့ပျောက်တာပါကနော်ကရွာကပါကောက်ရိုးလှည်းပေါ်က၂ပတ်၃ပတ်ဂျွန်းပြန်ကြပြီတော့လှည်းဘိန်းအောက်လက်ခင်းကျပြီးနင်းသွားတာကျိုးတယ်-တုတ်တယ်-ကွဲတယ်သုံးမျိုးလုံးဟာဝန်အူမြစ်ပြုတ်ရေနဲ့အမြစ်ပတ်တီးနဲ့ပဲလုံးဝအကောင်ဖြစ်သွားတာပါအကျန်းဘလမ်းလုံးဝခန်ပါတယ်တကယ်ဆေးစွမ်းကောင်းဆိုတာကျနော်လကါတွေ့ပါဗျအာမခန်ရဲတယ်ဖြစ်ချိန်ကတော့၁၄နှစ်ကပါအခုဆို၃၄ထဲရှိပါပြီဒီဆေးကိုဆေးဆရာကြီးများသိစေချင်ပါတယ် (၄)အရိုးကျိုး တာအတွက် ဆေးကောင်းတစ်လက်ဖြစ်သလို မန်းအားကြီးတဲ့ သူများအတွက် ဓါတ်ဗူးထဲမှာရေနွေးစိမ်ပြီး လ္ဘက်ခြောက် နဲ့ Read more
အိမ်​​စောင့်​နတ်​ ဆိုတာ …???
May, Knowl #အိမျစောငျ့နတျ ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျက Duty ခထြားလို့ စောငျ့တာတော့ မဟုတျဘူး။ ကိုယျ့အိမျကို အမှီပွုပွီးဖွဈနတေဲ့နတျကို အိမျစောငျ့နတျလို့ ချေါတာနျော။ အေး… အိမျကိုစောငျ့ရမယျလို့ တာဝနျပေးထားတာလို့တော့ မအောကျမလေ့နေဲ့။ #ကုသိုလျကောငျးမှုလုပျပွီးတိုငျး နတျတှကေိုလညျး အမြှဝပေါ။ ဒဝေတာနံ ကိုယျမမွငျရပမေယျ့လို့ ကိုယျ့ရဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ အိမျစောငျ့နတျတို့၊ တောစောငျ့နတျတို့၊ တောငျစောငျ့နတျတို့ဆိုတာ ရှိတယျ။ စောငျ့ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျက Duty ခထြားလို့ စောငျ့တာတော့ မဟုတျဘူး။ ကိုယျ့အိမျကို အမှီပွုပွီးဖွဈနတေဲ့နတျကို အိမျစောငျ့နတျလို့ ချေါတာနျော။ အေး… အိမျကိုစောငျ့ရမယျလို့ တာဝနျပေးထားတာလို့တော့ Read more
ဂျပန်မှာ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး ကျည်ဆံရထားကို စမ်းသပ်
May, ဂျပန်မှာ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး ကျည်ဆံရထားကို မေလ စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုစမ်းသပ်မူ ကို မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ —ထူးခြားတဲ့ ငွေရောင် ဒီဇိုင်းပုံသဏ္ဍန်၊ ၇၂ ပေ ရှည်တဲ့ ဦးခေါင်းပိုင်းနဲ့ ရထားဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြန်ဆုံး ကျည်ဆံရထား ဖြစ်လာမှာပါ။ ကျည်ဆန်ရထားတွေတဲ့ မူလဇာတိ ဂျပန်ဟာ နောက်ဆုံးထုတ် မျိုးဆက်သစ် ကျည်ဆန်ရထား Alfa-X ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီး ဒီ ကျည်ဆံရထားဟာ တစ်နာရီကို ၂၂၄ Read more
ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းတွေ ဖျက်ရမလား ? အနုပညာ ရပ်ဝန်းကို ဖျက်ရမလား ? တခုခုတော့ ဖျက်သင့်နေပြီ ယဉ်ကျေးလိမ္မာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ သင်သင် ဒီလိုအနုပညာရှင်တွေ ရှိနေရင်တော့ ခလေးတွေအတွက် ရတက်မအေးစရာ ပါပဲ အနုပညာ ဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှု့ နူးညံ့မှု့ သူတပါးရဲ့စိတ်ကို ငြိမ်းအေးစေမှု့ ပါ ခေတ်ရေစီးကြောင်း နဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ် မှု့ ဆိုတာ အနုပညာမဟုတ်ပါဘူး အနုပညာ ဆိုတာ Read more
(ဟာသ အမြင်ဖြင့်သာကြည့်ရန်😛😛😛) ပြောရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာလူဦးရေ အစည်းကားဆုံးမြို့ထဲက တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ နယူးယောက်လို မြို့ကြီးမှာ ဆိုရင်တော့ဖြင့် သူခိုးအမျိုးအစား တစ်မျိုးခေတ်စားနေပါသည်ပေါ့နော်… ဘာခိုးတယ်ထင်လဲ??? ကားနောက်ကြည့်မှန်တဲ့ဗျ(side mirror) ပေါ့… ကားကြီးတစ်စီးလုံး ရှိနေရဲ့သား နောက်ကြည့်မှန်လေးပဲ ခို့တယ် ဆို လို့ သူခိုးတေကိုတော့ လျော့မတွက်စေချင်ဘူး…အယ်လယ် နယူးယောက်သူခိုးဆိုတဲ့ ဂုဏ်လေးတော့ ထိန်းစေချင်သည် ဇိမ်ခံကားတေဖြစ်တဲ့ Audi, Porsche, Mercrdes-Benz, BMW စသဖြင့်ပေါ့ နောက်ပိုင်း ခေတ် ကားတော်တော်များများက side mirror တွေမှာ camera တို့ Read more
Visitors today : 16,499
Page views today : 51,141
Total visitors : 98,300
Total page view: 252,201